က stop Louvre Mona Lisa ကိုမှာ peek ဘို့ဒါမှမဟုတ် Arc de Triomphe တက်ပြီးအားဖြင့်သူတို့အား glutes လေ့ကျင့်ခန်း. အဆိုပါရိုင်းအပေါ်တစ်ဦးညစာခရုဇ်ခံစားကြည့်ပါ, အခြို့သောပြင်သစ်ဖက်ရှင်ဆိုင်များမှတစ်ဦးအလည်အပတ်ပေးဆောင်, ညနေခင်းတွင် အသက်ဝင်လာသည်နှင့် တောက်ပနေသော အီဖယ်မျှော်စင်ကို ယူဆောင်သွားပါ။.
Eurostar အမြန်ရထားသည်သင့်အား Paris မှ London သို့နှစ်နာရီကျော်ကြာသည်, အရာနည်းလမ်းသငျသညျလျော့နည်းအချိန်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အချိန်ပိုမို Adventures ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်. ထို့ကြောင့်, လန်ဒန်ကိုရထားဖြင့်သွားရန်အကောင်းဆုံးဥရောပမြို့တော်များထဲကတစ်ခုအဖြစ်ငါတို့ယူဆသည်.
အနောက်တိုင်းဥရောပမြို့တော်ကနေကွဲပြား, ပရာ့ဂ်အရှေ့ဥရောပမှာရှိတဲ့ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏အရင်းအနှီးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးဗဟိုဥရောပမြို့ကြီးများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ကမ်ဘာပျေါမှာအကျော်ကြားဆုံးစာကြည့်တိုက်တမူလစာမျက်နှာ, အဆိုပါ Klementium, ပရာ့ဂ်တိုင်းထောင့်ပတ်လည်မှာယင်း၏ယဉ်ကျေးမှုကိုရည်ညွှန်းပြသ. အဆိုပါအာကာသနာရီသွားရောက်ကြည့်ရှု, ကမ်ဘာပျေါမှာအသက်အကြီးဆုံးတဲ့ operating နာရီ. ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်လည်ပါ မြို့ဟောင်းရင်ပြင်, ဘယ်မှာ cobblestone လမ်းများ နှင့် pedestrianized လမ်းကြောင်းသင်သည်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲလှည့်လည်နာရီပေါင်းများစွာနိုင်ပါတယ်ဆိုလို.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 အကောင်းဆုံးဥရောပမြို့တော်ခရီးသွားဖြင့်ရထား” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/european-capitals-travel-train/?lang=my ့- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
မြို့တော် မြို့တော်များ europeantravel europetrains eurotrip လန်ဒန် ရထားခရီးသွား travelfrance travelgermany netရာဝတီ
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဂရိနိုင်ငံ, ရထား Travel အီတလီ, ရုရှားခရီးသွားရုရှား, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား